Efa vita fa iniana giazana ny Pasipaoron-dRavalomanana Marc - Informations et Actualités sur Madagascar
Politique Efa vita fa iniana giazana ny Pasipaoron-dRavalomanana Marc
Efa vita fa iniana giazana ny Pasipaoron-dRavalomanana Marc
by Alpha world on 23 h 27 in Politique
Raha ny loharanom-baovao iray avy amin’ny ankolafy Ravalomanana dia “efa vitan’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny ny pasipaoron’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc, saingy iniana giazana.” Ny fanjakana ihany arak’izany no mahalala ny tena antony.
Mampanontany tena ihany anefa ny antony tena tsy amerenana izany pasipaoro izany amin’ny tompony. Tena hitondra any amin’ny fitoniana sy ny fampihavam-pirenena tokoa ve izao fihetsika ataon’ny fitondram-panjakana izao?
Na izany na tsy izany, miandry ny fandraisana andraikitrin’ny fitondram-panjakana ireo fikambanana maro izay manomana ny fampihavanam-pirenena. Miandry ny mpanaraka vaovao ny amin’ny mety ho fihetsikin’ny fitondram-panjakana manoloana ny hetsika fampihaonana faobe izay hatao ny 20 Aogositra ho avy izao. Sao mantsy dia ho lasa kobaka am-bava fotsiny indray ity fampivaham-pirenena izay dradradradraina etsy sy eroa ity. Tsiahivina fa ny filoha teo aloha, Marc Ravalomanana dia efa nilaza fa “efa ela ny tenany no nivonona ny hody an-tanindrazana, ary tsy matahotra fitsarana mihitsy.”
By Alpha world at 23 h 27